ထိုင္းႏိုင္ငံ ခြၽန္ ဘူရီခ႐ိုင္တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာျမန္မာ လုပ္သားေလးမင္း ထက္ ထိုင္း ထီသိန္းဆုႀကီးေပါက္ၿပီး အိမ္ျပန္ခရီး - Tha Dinn Oo
ထိုင္းႏိုင္ငံ ခြၽန္ ဘူရီခ႐ိုင္တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာျမန္မာ လုပ္သားေလးမင္း ထက္ ထိုင္း ထီသိန္းဆုႀကီးေပါက္ၿပီး အိမ္ျပန္ခရီး
ထို င္းႏိုင္ငံ ခြၽန္ဘူရီခ႐ိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာျမန္မာလုပ္သားေလးမင္းထက္ ထိုင္းထီသိန္းဆုႀကီးေပါက္ၿပီး အိမ္ျပန္ခရီး…
1-8-2020 ရက္ေန႔ထြက္ သိန္းထီေပါက္ခဲ့ၿပီးယေန႔မွသာ ျမန္မာျပည္သို႔ အၿပီးျပန္ခဲ့တာပါ
ျမဝတီၿမိဳ႕မွာ ”ရဲမင္းဦး” ေငြလဲအက်ိဳးေဆာင္တြင္ ျမန္မာေငြ သိန္းရာေက်ာ္ ယုံၾကည္စြာ လဲလွယ္ၿပီး ေအေအစီကိုရဲမင္း အတြက္လည္းSAMSUNG ဖုန္းအသစ္တစ္လုံး လက္ေဆာင္ ဝယ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း….ျမန္မာျပည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ထီကံထူးရွင္ညီေခ်ာ”မင္းထက္” တစ္ေယာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန် ဘူရီခရိုင်တွင် အလုပ် လုပ်နေသောမြန်မာ လုပ်သားလေးမင်း ထက် ထိုင်း ထီသိန်းဆုကြီးပေါက်ပြီး အိမ်ပြန်ခရီး
ထို င်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီခရိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသောမြန်မာလုပ်သားလေးမင်းထက် ထိုင်းထီသိန်းဆုကြီးပေါက်ပြီး အိမ်ပြန်ခရီး…
1-8-2020 ရက်နေ့ထွက် သိန်းထီပေါက်ခဲ့ပြီးယနေ့မှသာ မြန်မာပြည်သို့ အပြီးပြန်ခဲ့တာပါ
မြဝတီမြို့မှာ ”ရဲမင်းဦး” ငွေလဲအကျိုးဆောင်တွင် မြန်မာငွေ သိန်းရာကျော် ယုံကြည်စွာ လဲလှယ်ပြီး အေအေစီကိုရဲမင်း အတွက်လည်းSAMSUNG ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး လက်ဆောင် ဝယ်ပေးခဲ့ပါကြောင်း….မြန်မာပြည် မော်လမြိုင်မြို့မှ ထီကံထူးရှင်ညီချော”မင်းထက်” တစ်ယောက် ငြိမ်းချမ်းပါစေ
မိုးကုတ်မြို့ SP Bakery ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းကို မိမိတို့ ဖမ်းဆီးထားဟု TNLA ပြော
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့ စံပြမုန့်တိုက်(SP Bakery)ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းကို လူသုံးယောက်က ကားပေါ်တင် ဖမ်းဆီးသွားမှု ဖြစ်စဉ်သည် မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်(TNLA)မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် တားဘုန်းကျော်က မဇ္ဈိမသို့ အတည်ပြု ပြောသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးကုတ်မြို့ အောင်ချမ်းသာဈေး၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ငံကျော်နှင့် တွေ့ဆုံ အပြီးနောက်မှာ ဦးကျော်ဝင်းသည် ၎င်းကားရပ်ထားရာ နေရာသို့ အသွား ကားပေါ်အတက်မှာ SURF ကားတစ်စီး ဘေးချင်းယှဉ်ရပ်ကာ လူသုံးယောက် ဆင်းလာ၍ ဦးကျော်ဝင်း ကို ကားပေါ်ကနေ ဆွဲခေါ်ကာ တင်ဆောင် မောင်းနှင်သွားသည်ကို Video ဖိုင်မှာ တွေ့ရသည်။ TNLA မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး […]
ဘယ္သူ မွ မႀကိဳက္ လို႔ အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ေနတာ ပါ လို႔ ေစ်းဗန္း ခင္း လိုက္ တဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္
ဘယ္သူ မွ မႀကိဳက္ လို႔ အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ေနတာ ပါ လို႔ ေစ်းဗန္း ခင္း လိုက္ တဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေမပန္းခ်ီကေ တာ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့မ်က္ႏွာကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားထုႀကီးရဲ႕ဝန္းရံအားေပးျခင္းကို ရရွိထားတဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းအျပည့္နဲ႔ အႏုပညာေလာကမွာ ေနရာတစ္ခု ရလာသူျဖစ္ပါတယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာ ဆိုရင္လည္း အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္က်ရာအ႐ုပ္ထင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ပုံေဖာ္ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အရမ္းမိုက္တဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ ဆက္ဆီက်က် ဖက္ရွင္ မ်ိဳးေလးေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဝတ္တတ္တာေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္အားေပးမႈေတြကို ရရွိထားခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေလး ကို တင္ေပး လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ […]
မကြာခင် MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တွေ့မြင်ရတော့မယ့် သူလေးက?
မကြာခင် MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တွေ့မြင်ရတော့မယ့် သူလေးက? ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကြော်ငြာ မော်ဒယ် ငြိမ်းမြတ်သူ ရဲ့ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ရိုးသား ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ ယခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ သူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို မရပ်နားပဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက်ပါ။ ကြော်ငြာတွေရိုက် photo model လုပ်ရင်း သူမကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေကို သူမရဲ့ နေ့စဥ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူမဟာ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ခံနေ ရပါတယ်။ သူမကို အားပေးကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း အပေးခံ ရပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ဟာသအနေနဲ့ […]
အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ အတွင်းသားလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ထားသော ဆက်ဆီမော်ဒယ် မရမ်ဆိုင်းနု
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း မှာ ကျရှုံးခဲ့ပေမယ့် တက် လို့ ရတဲ့ မြန်မာပြည် က တက္ကသိုလ်များ